China Steel Flat Bar Q235B Yekuvaka fekitori nevagadziri |Zhanzhi
Steel flat bar inoreva simbi ine hupamhi hwe12-300mm, ukobvu hwe4-60mm, rectangular muchinjiko chikamu uye kushoma mupendero.
Simbi yakafuratira bhaa inogona kupedzwa simbi chigadzirwa, uye inogona zvakare kushandiswa sewelded pombi isina chinhu uye shizha rakashama relaminating uye rolling sheet.Madimikira ayo anoratidzwa mumamirimita ehukobvu * hupamhi, uye simbi flat bar inogona kupedzwa simbi, inoshandiswa sezvikamu, manera, mabhiriji uye fenzi, etc. simbi flat bar inogonawo kushandiswa seyakashaikwa yewelding simbi yakaoma uye slab ye stacking uye kukungurutsa ndiro dzakatetepa.
1) Giredhi: Q235B
2) Dimensions: customized
6) Sevhisi: kubaya, kucheka, kupenda, nezvimwe.
1) Simbi yakafuratira bhaa inokungurutswa nekutsauka kwakashata, asi inounzwa zvinoenderana nehuremu chaihwo, uye reshiyo yekushandiswa i1 ~ 5 muzana mapoinzi akakwira kupfuura ayo esimbi ndiro.
2) Simbi yakafuratira bar inogona kugadzirwa pahupamhi hwakagadziriswa, hupamhi uye kureba zvinoenderana nezvinodiwa nevashandisi, iyo inoderedza kucheka kwevashandisi, inochengetedza maitiro ekushanda, inoderedza kushanda uye kushandiswa kwezvinhu, uye zvakare inoderedza kugadzirisa kurasikirwa kwezvinhu, kuchengetedza. nguva, basa uye zvinhu.
Inopisa yakakungurutswa simbi flat bar inogona kushandiswa kugadzira zvikamu, escalator, mabhiriji uye fenzi.Kupisa yakakungurutswa simbi flat bar ine simba rakanaka, uye pamusoro peinopisa yakakungurutswa simbi flat bar yakatsetseka kupfuura mamwe masimbi.Uye zvakare, iyo geji yehukobvu hwesimbi inopisa yakatenderedzwa flat bar yakasimba kwazvo, iyo inosarudza kuti inopisa yakakungurutswa simbi flat bar yakanyatsokodzera welding.Zvakakosha kutaura kuti simbi flat bar ine huremu hwakakura hwekutakura.Mukugadzira maitiro ezvikamu, escalator uye fenzi, welding yakakosha kugadzira tekinoroji.Panguva imwecheteyo, pamusoro pesimbi inofanira kunge yakatsetseka uye inokwanisa kutakura humwe huwandu hwezvinhu zvinorema.Uye mamwe maitiro esimbi flat bar anongozadzisa zvizere zvinodiwa.Nenzira iyi, inopisa-yakakungurutswa simbi flat bar yave iyo mbishi yezvinhu zvekugadzirisa zvikamu, escalator uye fenzi.
Kupisa-yakatenderedzwa simbi flat bar inogona kushandiswa sewelding simbi billet uye slab yelaminate sheet.Inopisa yakakungurutswa simbi flat bar imhando yesimbi ine rectangular interface, inogona kutorwa sechikamu chesimbi refu ndiro.Izvi zvinoita kuti inopisa yakakungurutswa simbi flat bar inogona kugadziriswa mundiro yesimbi ine nzvimbo yakakura.